Kedu ihe bụ ROI na isi ọwụwa? | Martech Zone
Tuesday, June 9, 2009 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Companieslọ ọrụ ngwanrọ na ngwanrọ dị ka ụlọ ọrụ ọrụ na-eche na ha na-ere teknụzụ. Technologyre teknụzụ dị mfe… ọ nwere akụkụ, weghara ohere, nwee atụmatụ akọwapụtara, oke, ikike… yana ụgwọ ya. Nsogbu bụ na ọtụtụ ndị anaghị azụ teknụzụ.
Nye nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa oge zuru oke ma ha nwere ike ịgbanwe ihe ọ bụla arịrịọ maka amaghị n'ime usoro mmeri na uru maka ụlọ ọrụ. Ana m arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ bụ ndị kachasị asọmpi (n'echiche anyị - ọ bụghị nke m) bụ ngwanrọ na-emeghe. Ọ bụrụ na anyị rere sọftụwia dị oke ọnụ nke sọsọ sọftụwia na-asọmpi, anyị agaghị enwe ndị ahịa 300+. Ihe mere anyị ji eto eto bụ na anyị abụghị n’ezie ere software - anyị na-ere nsonaazụ.
Olileanya anyị kwenyere na uru ịkwaga na ntanetị anyị bụ na ọ ga-eweta enweghị isi ọwụwa n'okporo ụzọ. Enweghị isi ọwụwa na oge ezumike, enweghị isi ọwụwa na mmezi, enweghị isi ọwụwa n'ihe gbasara nchekwa, enweghị isi ọwụwa na scalability, enweghị isi ọwụwa na arụmọrụ, enweghị isi ọwụwa n'ịkụziri ndị ọrụ, enweghị isi ọwụwa n'ihi na o siri ike iji… na ihe niile enweghị isi ọwụwa site na ọdịda.
Ikekwe ezigbo asọmpi anyị bụ Tylenol!
Fọdụ atụmanya Akara ohere nke isi ọwụwa… nke ahụ dị mma… anyị anọghị ebe a maka ha. Ọ ga-akara anyị mma isoro ndị ahịa na-etinye uche na nsonaazụ. Nsonaazụ dị ka akọwapụtara ya ha, ọ bụghị us.
Mgbe ọ bụla ụlọ ọrụ gị na-etinye ego na teknụzụ, ọ bụghị ngwaike na ngwanrọ (ndo ndị injinia!) Na ha na-azụ - n'agbanyeghị otu esi dị mma. Ihe ụlọ ọrụ gị na-etinye n'ezie na ya bụ ndị mmadụ n'ihu na n'azụ ngwaahịa ahụ. Companylọ ọrụ gị na-etinye ego na azụmaahịa nke ha tụkwasịrị obi. Companylọ ọrụ gị na-etinye ego na ọchụnta ego nke malitere ụlọ ọrụ ị maara dịka onye ndu. Companylọ ọrụ gị na-etinye ego na ndị mmadụ - ndị mmadụ edozila nsogbu nke na-enye gị isi ọwụwa.
Otu onye ahịa na-arụrụ gọọmentị ọrụ ọrụ gwara m nso nso a:
Doug - Achọghị m ịma ROI. Achọghị m ịma banyere ego ego ngwa gị nwere ike ime anyị. Achọghị m ịma banyere nsogbu. Achọghị m ịma maka teknụzụ. Ihe mere m ji akwụ ụlọ ọrụ gị ụgwọ bụ na ị nọ ebe ahụ iji zaa ekwentị ma ọ bụ ozi ịntanetị mgbe m nwere ajụjụ… ị ma azịza ya. Nọgide na-aza ekwentị ma na-enyere m aka, anyị ga-arapara gburugburu. Kwụsị ịza ekwentị m ga-ahụ onye nwere ike.
Nke a bụ ihe kpatara ọrụ ndị ahịa ji bụrụ ihe dị oke egwu nke mmalite teknụzụ dị ukwuu. Achọghị m ịma otú oyi gị ngwa bụ… mgbe ị na-amalite ịgwa ndị ahịa gị ihe ị enweghị ike nyere ha aka na, atụla anya na ha banye a ọhụrụ (nevermind an upsell!). Ndị ahịa gị chọrọ ihe ịga nke ọma ma ha na-atụkwasị gị obi ka ị nye ha ya. Better ga-ege ntị ma na-aza. Ọbụna ka mma - ị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ iji wulite ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa gị.
Ọbụna n'ime sọftụwia dị ka ụlọ ọrụ Ọrụ, ụlọ ọrụ achọpụtala na ha enweghị ike zoo n'azụ peeji nkwado ndị ahịa ma ọ bụ isi ihe ọmụma… ma ọ bụ njọ, nzukọ ndị ahịa. Ndị ahịa SaaS kwesịrị ịghọta otu esi emezi ihe ngwọta ha tinyeworo iji nwee ihe ịga nke ọma. Nke ahụ chọrọ ndị ọrụ ruru eru ma nwee ahụmahụ ghọtara ihe ọ na-ewe.
Ndị ndu a ghọtara ụzọ nke nkwụsi ike pere mpe, ha ghọtara etu esi agụ ndị ahịa wee hụ ma ha bụ atụmanya dị ukwuu maka uto ma ọ bụ nlebara anya ndị ahịa… ihe niile ha ghọtara bụ otu esi emetụta ndị ahịa ọ bụla. Ọ dịghị achọ ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi na-adịghị mma, usoro mmechi na-eleghara ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa anya, ma ọ bụ micromanagement ka njọ ma ọ bụrụ na akụnụba adịkwaghị. Ọ chọrọ iku ndị ị tụkwasịrị obi, na-ekwe ka ha mee mkpebi dị ukwuu maka ụlọ ọrụ ahụ, na iwepụ ihe mgbochi niile iji jeere ndị ahịa ozi n'ụzọ dị irè (na uru).
You na-enye ndị ahịa gị ọganiihu? Ma ọ bụ ndị ọrụ gị na-enye ha ọzọ isi ọwụwa?
Tags: Ndiaguọ dị mmaMobile na Mbadamba ụrọbenchmark na-abụghị ọrụprwebAkụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya